Wararka - BADAN BADAN EE SOO SAARKA BARNAAMIJYADA BEERAHA, SIDA AY UGU SOO BAXDAY FARMAAJOYADA GOBOLKA, HADA AY HELI KARTAA DHAGAYSIGA AGR FARM
Beerta loo yaqaan 'AGR Garlic Farm', oo caan ku ah talooyinka ka imanaya macaamiisha maxalliga ah, ayaa sannado badan ku sii kordhayay toonta dhulka. Ganacsiga goosashada wuxuu abuuraa waxyaabo badan oo toon ah oo laga soo saaray toonta cusub ilaa budada toonta.
Khabiirka AGR Garlic, Maareeyaha Wendy Chen, ayaa ku faraxsan in Beerta Garlic ay ogolaatay inay keydiso wax soo saarkooda. Wendy ayaa tiri, “AgR Beeraha Beeraha ee loo yaqaan 'AGR Garlic Farm' waa wax u gaar ah waqooyiga Shiinaha. Cid kale ma bixiso alaabada noocaas ah. Kahor intaanan awoodin inaan ku dhawaaqno saamiga keydka ee suuqa maxalliga ah, waxaan iska iibinay wax kasta oo aan haysano. Jawaabta ay alaabtu ka heleen macaamiisheena joogtada ah waxay noqotay mid layaableh. Xaqiiqdii waan kugula talin karaa toonta cusub. ”
Waxyaabaha laga helo beeraha ee loo yaqaan 'AGR Garlic Farm Farm' waxaa ka mid ah guluubyada toonta cusub, noocyo kala duwan oo toon ah oo la tolo, budada toonta, granules-ka, iyo saliida toonta.
Crisp Xu, oo ah agaasime isla markaana ah aasaasaha beeraha AGR Garlic Farm, ayaa yidhi, “Marka ay beeralayda kale ee maxaliga ahi ay noo soo dhawaadeen si ay u eegaan inay dhoofiyaan wax soo saarkooda waan ku faraxsanahay inaan awoodno inaan caawinno.
Ma lihin toon fara badan oo ka mid ah alaabtayada, waana ku faraxsanahay markaan maqalno in macaamiisha dibedda ku nool ay ku raaxeysanayaan kala duwanaanshaha. Waxaan nahay farabadan hektarro beeraley ah oo dhoofinta daneynaya inay ilaashadaan sumcaddeena, la shaqeynta miyiga waxay sifiican ula jaanqaadi karaan anshaxeena ganacsi. ”
Haddii aad jeclaan lahayd faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan AGR Garlic Farm iyo noocyadeeda kala duwan fadlan booqo bogga: www.primeagr.com. Wax soosaarka Beerta Garlic waxaa kaliya laga heli karaa keydka oo diyaar u ah in la iibiyo oo loo soo diro albaabadaada kooxdeena iibinta ee xilligan.
Xudunta AGR Garlic waa u heellan qaab nololeed dabiici ah. AGR Garlic Farm waa mid iskood u shaqeynaya waana hawl dhab ah 'goob saxan' u adeegsaneysa heerka ugu sareeya ee joogtaynta. Adeegsiga dhaqamada beeraha ee ugu waara AGR waxay ku faantaa dhadhamin heer sare ah oo tufaax ah oo laga soo saaray baadiyaha Aasiya. Ganacsiga beeraha dabiiciga ah wuxuu ku fidaa labo beerood wuxuuna ku fiday ku dhowaad kumanaan hektar. Sinjibiil dabiici ah, tufaax, basasha, iyo toonta markii la joogo, waxaa lagu koriyaa beeraha. AGR Farm wuxuu kaydiyaa waxsoosaarka miyiga isbeddelaya ee alaab-qeybiyeyaasha maxalliga ah iyo kuwa dibedda ka keenaya.
Noocyada balaaran ee AGR Garlic Farm waxyaabaha lagu sawiray hada waa la heli karaa www.primeagr.com.